Intambo Yochungechunge Lwe-Filament - China Abakhiqizi Bochungechunge Lwe-Filament, Abahlinzeki
I-filament tape noma i-strapping tape iyitape elizwela ingcindezi elisetshenziselwa imisebenzi eminingana yokupakisha njengokuvala amabhokisi e-fiberboard enamanzi, ukuqinisa amaphakheji, ukugoqa izinto, i-pallet unitizing, njll. Siqukethe isinamathelisi esizwela ingcindezi esifakwe entweni esekelwayo evame ukwenziwa ifilimu le-polypropylene noma le-polyester kanye ne-fiberglassfilaments efakiwe ukwengeza amandla aphezulu wokuqina. Yasungulwa ngo-1946 nguCyrus W. Bemmels, usosayensi osebenzela uJohnson noJohnson.
Izinhlobo ezahlukahlukene ze-filament tape ziyatholakala. Abanye banamakhilogremu angama-600 wamandla aqine ngamasentimitha ububanzi. Izinhlobo ezahlukahlukene namamaki wokunamathisela ayatholakala.
Ngokuvamile, itheyiphu ingu-12 mm (approx. 1/2 intshi) kuye ku-24 mm (approx. 1 inch) ububanzi, kodwa futhi iyasetshenziswa nakwezinye ububanzi.
Amandla ahlukahlukene, amakhalipha, kanye nokwenziwa kokunamathisela kuyatholakala.
Iteyipu ivame ukusetshenziswa njengokuvalwa kwamabhokisi athonywe njengamabhokisi agqagqene agcwele, ifolda yamapaneli amahlanu, ibhokisi lesibonakude eligcwele. Iziqeshana noma imichilo emise okwe- “L” isetshenziswa ngaphezu kokuchaphazeleka okugqagqene, kunwebeka ngama-50 - 75 mm (2 - 3 amayintshi) kuma-panels ebhokisi.
Imithwalo esindayo noma ukwakhiwa kwebhokisi elibuthakathaka nakho kungasizwa ngokusetshenziswa kwemichilo noma amabhande e-filament tape ebhokisini.
Ivikela i-fiberglass strape tape
Ithephu yentambo ingumkhiqizo wokunamathela owenziwe kusuka ku-fiber fiber noma i-polyester fiber nge-PET film njengento eyisisekelo.
Inokuqina okuqinile nokuqina kokuqina, anti-ufa, self-adhesive enhle kakhulu, evikela ukuqhutshwa kokushisa, izinga lokushisa eliphakeme ukumelana.Itheyiphu yentambo isetshenziswa kakhulu ekuvalweni kwamabhokisi asindayo, izimpahla zepallet zibopha futhi zilungisa, zibopha izintambo zamapayipi, njll. .